Waxay abuureen 15-05-2012
Author: Project Opensky (POSKY), repaints by Luke Powell, codadka by Emil Serafino Jr website http://www.freeskyproject.com/
Boeing 747-400 in midabada Aerolineas Argentinas, mashiinka qurux badan qaabeeyey si kaamil ah by Hiroshi Igami. Saddexda qaabab ka mid ahaa u dhigma saddex Boeing 747 diiwaangeliyay in shirkadda: LV-ALJ, LV-AXF iyo LV-BBU. qol The dalwaddii waa default FSX B747 iyo dhawaqyada waa kuwa ka 747 General Electric dhabta CF6-80C2B5F
Aerolíneas Argentinas (istcimaalka: AR, ICAO: ARG) waa airline qaranka ee Argentina, privatized in 1990s ee dowladda ee Carlos Menem (Justicialist Party, PJ). Waxaa la qarameeyo ee September 2008 hoos dawladda Cristina Kirchner (Front for Victory-PJ), maxkamad Argentine ayaa diiday wax magdhow in shirkadda Isbaanish Marsans, milkiilaha ganacsiga.
Shirkadda ayaa sidoo kale leh kabista Austral Lineas Aereas, ayaa duulimaadyo gudaha, kaas oo sidoo kale ay la in 2008.
Aerolineas Argentinas ayaa la filayaa inuu ku biiro isbahaysiga SkyTeam iyo waxay noqon doontaa shirkadda kaliya ee South America. Heshiis waa in lagu dhawaaqay bishii October 2010 for galay isbahaysiga ee 2011 ama 2012 galo. (Source: Wikipedia)